Sida loo Beddelaan Amr in MP3 on Mac OS X (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Beddelaan Amr in MP3 on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
1. Waa maxay Amr?
Waa maxay Amr? Amr u taagan tahay Adaptive Multi-Rate codec audio, an riixo xogta audio waayo, hadalkaaga sireed. Oo waxaa sidoo kale qaab file lagu qoro hadalka aadanaha iyo codka la codec Amr ah. Telefoonnada gacanta casriga ah Dad badan oo, gaar ahaan taleefannada gacanta Ericsson 3G isticmaali Amr qaab files si ay u qoraan fariin hadlay. Marka laga reebo qaar ka mid ah codsiyada sida Apple QuickTime iyo RealPlayer, ciyaartoyda ugu badan ma turjumi kara faylasha Amr. Si aad u ciyaaro files Amr dheeraad ah si xor ah, waa fikrad wanaagsan in la kordhiyo in sharcigaasi waafaqsan by diinta aad Amr in MP3.
2. Sida loo badalo Amr in MP3 on Mac OS X
Haddii aad ku kaydsan qaar ka mid ah cajalado maqal ah ee files Amr oo aad rabto inaad badalo Amr in MP3 Mac isticmaalka ballaaran, waxaa jira qalab si sahlan loo isticmaalo si aad u qabtaan Amr Mac in ay MP3 diinta. Maqaalkani waxa uu halkan ku siinayaa Converter fiican Amr in MP3 Mac (El Capitan taageeray). Waxay leedahay laba nooc: version Intel iyo version PowerPC. Just dooro version saxda ah ee processor Mac. Si aad u hubiso processor, waxaad riixi kartaa Apple ah "icon ka menu ugu weyn, ka dibna dooro About this Mac" doorasho.
Hadda, kaliya raacaan hagaha si loogu badalo Amr in MP3 on Mac OS X talaabo talaabo ah. Geedi socodka waa mid aad u fudud, kaliya qasabno yar.
Talaabada 1: dejinta aad Amr files si Amr si MP3 Converter Mac
Waxaad laba habab kale oo ay ku shuban files Amr in Amr si MP3 Converter u Mac.
• Ka dib marka aad hesho files Amr ku kaydsan Mac, aad si toos ah u soo jiidi kartaa oo iyaga hoos u barnaamijkan.
• Tag File "> Import"> dar Audio Files "xitaa your computer disk adag dooro files Amr inay dajiyaan.
Talaabada 2: Dooro MP3 format uu furmo suuqa wax soo saarka
Riix labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan ayaa, ka dibna dooro MP3 format sida wax soo saarka ee Common Audio "qaybta ka.
Fiiro gaar ah: Mararka qaar, aad rabto in aad wax ka bedel aad files audio asalka ah. Tusaale ahaan, kaliya aad u baahan inay wada gooyay qaar ka mid clips rabin, ama ku milmaan laba clips Amr iwm Waxa kale oo aad samayn karo shaqo sixiddiisa in app this.
Tallaabo 3: Ka billow Amr in MP3 diinta on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
In geeska hoose ee saxda ah ee interface ugu weyn this app ee, waxaad riixi kartaa batoonka loogu badalo in ay Amr bilaabaan in ay MP3 diinta on Mac. Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli kartaa file MP3 la digital content isla audio. Haddii aad hesho waa adag tahay in la helo files wax soo saarka aad Mac, waxaad sameyn kartaa folder wax soo saarka keligaa. Si aad u samayn, riix Output bidix hoose ee suuqa kala barnaamijka lagu qeexi folder wax soo saarka.